(Redirected from Rukoto (rwizi))
VaFwe vanoti rwizyi (river) kureva rwizi. VaMambwe vanoti luzi (river, stream) vachireva rwizi.
VaWabo vanoti mwinji kana munji (n. river) vachireva rwizi.
VaNyakyusa vanoti ulwisi (river) kureva rwizi. VaTumbuka vanoti mronga (river) vachireva rwizi.
VaLenje vanoti kunselelo (downstream) vachireva zasi kwerwizi kwarunoyerera richienda.
VaChewa vanoti gwero kana magwero (a source, head or source of river), kureva panotangira rwizi.
VaLenje vanoti mukuku (Current, flow of a stream or river) kureva gukurudzi rerwizi. Pane izwi rinonzi makukurudzi kuShona.
VaKongo vanoti kukula (to flow along, to flow down, run down as water, trickle, pour down, drift, roll down).
VaLozi vanoti –welula (n. current in a river).
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Rwizi&oldid=74456"
This page was last edited on 13 Chivabvu 2020, at 01:18.